Dariiqa Bulsho: Sabab, Goorma iyo Sidee
Asal ahaan waxaa daabacay Ariadne Labs bishii Maarso 13, 2020 cinwaanka cinwaanka "Dariiqa Bulshada: Kani maahan maalin baraf ah" | La cusbooneysiiyay Maarso 14, 2020
Maqaalkan waxaa qoray qof Mareykan ah iyo sida, waxaa ku jira macluumaad iyo tixraacyo Mareykanka Laakiin waxyaabo badan oo ka kooban ayaa sidoo kale ku habboonaan doona dal kasta iyo dhaqan kasta oo adduunka ka jira.
Waxaa qoray Asaf Bitton, MD, MPH
Waan ogahay inay jiraan waxoogaa jahwareer ah oo ku saabsan waxa xiga ee la sameeyo inta lagu guda jiro waqtigan aan caadiga ahayn ee aafada, xiritaanka iskuulada, iyo carqaladaynta bulshada ee baahsan. Anigoo ah dhaqtarka daryeelka aasaasiga ah iyo hogaamiyaha caafimaadka bulshada, dad fara badan ayaa i weydiiya aragtidayda, waxaanan ku hoos bixin doonaa iyadoo ku saleysan macluumaadka ugu fiican ee aan heli karo maanta. Kuwani waa aragtidayda shakhsi ahaaneed, waxaanaan qaadayaa tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee hortayda ah.
Waxa aan si cad u dhihi karaa waa waxa aan qabanno ama aan sameynin, usbuuca soo socda waxay saameyn ballaaran ku yeelan doonaan gudaha deegaanka iyo laga yaabee in wadnaha qaran ee coronavirus. Waxaan kaliya ka harsannahay 11 maalmood ka dambeya talyaaniga ( xogta Mareykanka ) guud ahaanna waxaan ku soconaa waddo aan ku celineyno waxa nasiibdarrada ah ee halkaa ka socota iyo inta badan Yurub inteeda kale si dhakhso ah.
Waqtigan xaadirka ah, xayiraada iyada oo loo marayo raadinta xiriirka iyo tijaabada la kordhiyay kaliya waa qeyb ka mid ah istiraatiijiyadda lagama maarmaanka ah. Waa inaan u dhaqaaqnaa yareynta masiibada iyadoo loo sii marayo baahsanaanta, raaxada, iyo weecinta bulshada ee dhameystiran. Taas macnaheedu waa ma aha oo keliya in la xiro iskuullada, shaqada (inta ugu badan ee suuragalka ah), kulammada kooxeed, iyo munaasabadaha dadweynaha, laakiin sidoo kale sameynta xulashooyinka maalinlaha ah si looga fogaado midba midka kale intii suurtagal ah illaa Flatten Curve-ka hoose.
Nidaamkeenna caafimaad ma awoodi doono inuu la tacaasho tirada dadka la saadaaliyey ee u baahan daryeel deg deg ah haddii aanaan ka badin qalcadda oo aan iska fogeyn doono bulsho ahaan midba midka kale hadda laga bilaabo. Maalin maalinle ah, waxaan leenahay ilaa 45,000 oo sariir shaqaalaha ICU ah oo heer qaran ah, kuwaas oo lagu soo kicin karo qalalaasaha ilaa 95,000 ( Xogta Mareykanka ). Xitaa saadaasha dhexdhexaadka ah waxay soo jeedinayaan in haddii isbeddelka cudurada faafa ee hadda jira, awooddeenna (maxalli ahaan iyo qaran ahaanba) laga yaabo in laga adkaado horraantii dabayaaqadii Abriil. Markaa, istaraatiijiyadaha kaliya ee inaga fogeyn kara arintaan ayaa ah kuwa awood u siiya inaan si wada jir ah uga wada shaqeyno sidii aan u ilaalin laheyn caafimaadka bulshada iyadoo aan kala fogaano.
Xikmadda, iyo daruuri, ee qallafsan, hore, iyo qaab aad uxun ee fogeynta bulshada ayaa laga heli karaa halkan . Waxaan kugula talin lahaa inaad hal daqiiqo qaadato si aad u dhex marto garaafyada isdhaafsiga - waxay gurigaaga u kaxayn doonaan barta ku saabsan waxa aan u baahan nahay inaan hadda sameyno si looga fogaado qalalaasaha dambe. Casharrada taariikhiga ah iyo waaya-aragnimada waddammada adduunka oo dhan waxay ina tuseen in qaadista ficiladan goor hore saameyn weyn ku yeelan karto baaxadda cudurka dillaacay. Marka muxuu yahay qaabkan wanaajinta ee fogeynta bulshada micnaheedu yahay maalin kasta, marka iskuulada la joojiyo?
Waa kuwan tillaabooyinka qaarkood ee aad ku bilaabi karto hadda inaad reerkaaga ka dhigto mid nabdoon oo aad waxna ka qabatid ka-hortagga dhibaatooyinka sii xumaanaya:
1. Waxaan ubaahanahay inaan ku riixno hogaamiyadeena maxaliga, gobolka, iyo hogaamiyaasha qaran inay xiraan DHAMMAAN iskuulada iyo goobaha dadweynaha lagana joojiyo dhamaan dhacdooyinka iyo isu imaatinka dadweynaha hada .
Jawaabta degmo, magaalo ee degmo ma yeelan doonto saameyn ku filan oo loo baahan yahay. Waxaan u baahanahay qaab guud oo heer qaran ah oo loo dhanyahay waqtiyadan adag. La xiriir wakiilkaaga iyo gudoomiyahaaga si aad ugu booriso inay soo bandhigaan xiritaanka gobolka oo dhan. Ilaa maantadan la joogo, lix gobol ayaa howsha qabtay. Gobolkaagu waa inuu ka mid noqdaa. Sidoo kale ku boorri hoggaamiyeyaasha in ay kordhiyaan lacagaha loogu talagalay u diyaar garowga xaaladda degdegga ah ayna ka dhigaan ballaarinta awoodda baarista coronavirus-ka isla mar ahaantaana ah mudnaanta koowaad. Waxaan sidoo kale u baahanahay sharci dejiyeyaal si aan u soo saarno fasax mushahar jirro oo lacag leh iyo manfacyada shaqo la aanta ah si aan uga caawinno dadka in ay ka dhigaan wicitaan sax ah oo guriga lagu joogo.
2. Ma jiro ciyaar caruur lagu cayaaro, xaflado, hurdo-hurdo, ama qoysas / saaxiibo midba midka kale ku booqanaya guryaha iyo abaaraha.
Tani waxay u muuqataa mid xad dhaaf ah maxaa yeelay waa. Waxaan isku dayeynaa inaan abuurno masaafada u dhexeysa unugga qoyska iyo shaqsiyaadka dhexdooda. Waxay si gaar ah ugu habboonayn qoysaska leh caruur yar yar, caruur leh awoodo kaladuwan ama caqabado, iyo caruurta si fudud u jecel inay saaxiibadooda la ciyaaraan. Laakiin xitaa haddii aad doorato hal saaxiib oo kali ah, waxaad abuureysaa xiriirinno cusub iyo suurtagalnimada nooca gudbinta ee dhammaan iskuulladayada / shaqada / xiridda munaasabadaha dadweynaha ay isku dayaan inay ka hortagaan. Astaamaha cudurka Coronavirus waxay qaadataa afar ilaa shan maalmood inay isku soo baxaan. Qof kor u muuqda si fiican ayaa u soo gudbin kara fayraska. Wadaagista cuntada waa mid khatar gaar ah leh - runtii kuma talinayo in dadku sidaas sameeyaan qoyskooda dibaddiisa.
Waxaan horey u qaadnay talaabooyin bulsheed oo xad dhaaf ah oo wax looga qabanayo cudurkan halista ah - yaan si firfircoon aan iskugu dubarideyn dadaalkeena anagoo heysano heerar sare oo is dhexgalka bulshada ah guryaha dadka halkii iskuulka ama goobaha shaqada. Mar labaad - xikmadda hore iyo jahwareerka bulshada ee fogeynta ayaa ah in ay burburin karto qalooca kore, ay siiso nidaamkayaga caafimaad fursad aan laga badin karin, ugu dambeyntiina waxay yareyn kartaa dhererka iyo baahida waqti dheer ee fogaan bulsheed xad dhaaf ah (arag waxa haystay laga qabtay Talyaaniga iyo Wuhan). Waxaan u baahanahay inaan dhamaanteen sameynno qeybteena inta lagu jiro waqtiyadan, xitaa haddii ay tahay waxoogaa raaxo daro ah in muddo ah.
3. Is ilaali naftaada iyo qoyskaaga, laakiin ilaali masaafada bulshada.
Jimicsi samee, banaanka u bax / socod banaanka, oo kula xiriir taleefanka, fiidiyaha, iyo warbaahinta kale ee bulshada. Laakiin markaad bannaanka u baxdo, sida ugu wanaagsan ugu dadaal inaad ugu yaraan lix fiit u dhexeyso adiga iyo xubnaha aan ehelka ahayn. Hadaad caruur leedahay, iskuday inaadan u isticmaalin xarumaha dowliga ah sida dhismeyaasha ciyaarta, maadaama coronavirus-ku ku noolaan karo caag iyo bir illaa sagaal maalmood, dhismayaashaas si joogto ah looma nadiifiyo.
Inaad dibedda u baxdo waxay noqon doontaa mid muhiim ah xilliyadan la yaab leh, cimiloduna way fiicnaaneysaa. Dibadda u bax maalin kasta haddii aad awoodid, laakiin jir ahaan ka dheerow dadka ka baxsan qoyskaaga ama dadka aad wada deggan tihiin. Hadaad caruur leedahay, iskuday inaad laacato ciyaar kubbada cagta qoyska ah halkii aad caruurtaada kula ciyaari laheyd caruurta kale, maadaama isboortiga badanaa uu la micno yahay xiriir jireed toos ah lala yeesho dadka kale. In kasta oo laga yaabo inaan shakhsi ahaan u booqanno oday dhaqameedyadayada shakhsi ahaan, uma booqan lahayn guryaha dadka lagu xanaaneeyo ama meelaha kale ee ay dad waayeel ahi ku badan yihiin, maadaama ay ugu badan yihiin halista cudurada iyo dhimashada ka timaadda coronavirus.
Kala fogeynta bulshada ayaa saameyn ku yeelan kara (ka dib oo dhan, inteena badan ayaa ah hal abuur bulsho). CDC waxay bixisaa talooyin iyo ilo lagu yareynayo culeyska, iyo agabyada kale waxay bixiyaan istiraatiijiyado lagula tacaali karo walaaca dheer waqtigaan.
Waxaan u baahanahay inaan helno qaabab kale oo lagu yareeyo go'doomin bulsho ee dhexmara bulshooyinkayaga iyadoo loo marayo qaab macquul ah halkii aan booqan laheyn shaqsi ahaan.
4. Yaree inta jeer ee aad dukaamada, maqaayadaha, iyo dukaamada qaxwaha waqtiga la joogo.
Dabcan safarrada dukaanka raashinka waa lagama maarmaan, laakiin isku day inaad xadidid oo tag waqtiyo ay mashquul yar yihiin. Ka fikir inaad weydiisato dukaamada raashinka inay safka ka galaan dadka si ay u xadidaan tirada dadka ku jira dukaanada waqti uun. Xusuusnow inaad si fiican gacmaha u maydho kahor safarkaaga iyo ka dibba. Oo uga tag wejiyada iyo galoofiska caafimaadka xirfadlayaasha caafimaadka - waxaan uga baahanahay iyaga inay daryeelaan kuwa jiran. Ka fogow dadka kale inta aad wax adeeganeyso - oo xusuusnow in xirxiridda alaabada ay si xun u saamayso dadka kale sidaa daraadeed u soo gado wixii aad u baahatid qaarna uga tag cid kale oo dhan. Cunnooyinka la qaato iyo cuntada ayaa ka halis badan cuntada guriga lagu sameeyo marka loo eego isku xirnaanta ka dhexeysa dadka cuntada diyaariyo, raashinka qaada, iyo adigaba. Way adag tahay in la ogaado inta ay leegtahay halistaas, laakiin dhab ahaan way ka sarreeysaa ka samaynta guriga. Laakiin waad sii wadi kartaa oo aad sii wadi kartaa taageerada ganacsigaaga yaryar ee maxalliga ah (gaar ahaan maqaayadaha iyo tafaariiqda kale) inta lagu jiro waqtigan adag adoo iibsanaya shahaadooyin hadiyadeed oo internetka ah oo aad mar dambe adeegsan karto.
5. Haddii aad jiran tahay, kali kali ahaw, guriga joog, oo la xiriir xirfadle caafimaad.
Haddii aad xannuunsan tahay, waa inaad isku daydaa inaad gooni uga go'do qoyskaaga intiisa kale inta aad ku nooshahay. Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan haddii aad u qalanto ama aad u baahan tahay baaritaanka coronavirus, waxaad u wici kartaa kooxda daryeelka aasaasiga ah iyo / ama waxaad ka fiirsan kartaa inaad ugu wacdo Waaxda Caafimaadka Dadweynaha Massachusetts 617.983.6800 (ama waaxda caafimaadka gobolkaaga haddii aad ka baxsan tahay Massachusetts ). Kaliya ha dhex lugeeynin rugaha bukaan-socodka - marka hore wac si ay kuu siiyaan talo kugu habboon - oo noqon karta inaad tagto xarunta imtixaanka wadista ama booqasho firaaq leh oo fiidiyaha ama telefonka ah. Dabcan, haddii ay tahay xaalad degdeg ah wac 911.
Waxaan garwaaqsaday inay jiraan wax badan oo lagu soo dhisay talooyinkaan, iyo inay wakiil culus u yihiin shakhsiyaad badan, qoysas, ganacsato, iyo beelo. Kala fogeynta bulshada waa adag tahay waxayna si xun u saameyn kartaa dad badan, khaasatan kuwa wajahaya dayacnaanta bulshada dhexdeeda. Waxaan aqoonsanahay inay jirto sinaan qaab dhismeed iyo mid bulsheed oo lagu dhex dhisay gudaha iyo hareeraha talooyinka jahawareerka ah ee bulshada. Waxaan sameyn karnaa oo aan qaadi karnaa talaabooyin aan ku xoojineyno jawaabcelinteena bulshada ee ku wajahan dadka ay la soo deristo cunno yari, rabshadaha guryaha, iyo caqabadaha guryaha, iyo weliba dhibaatooyinka kale ee bulshada.
Waxaan kale oo aan garwaaqsaday in qofkasta uusan wax walba qaban karin. Laakiin waa inaan isku daynaa sidii ugu fiicnaa ee bulsho ahaan, laga bilaabo maanta. Kororka jahwareerka bulshada, xitaa hal maalin, waxay sameyn kartaa farqi weyn .
Waxaan heysanaa fursad horudhac ah oo aan nolosha ku badbaadino iyada oo loo marayo tallaabooyinka aan qaadno hadda oo aannaan haysan doonin toddobaadyo gudahood. Waa daruuriga caafimaadka bulshada. Sidoo kale waa masuuliyadeena bulsho ahaan inaynu wax qabsano inta aan wali ikhtiyaar u leenahay halka hawlaheena ay ku yeelan karaan saameynta ugu weyn.
Ma sugi karno.
Asaf Bitton, MD, MPH, waa madaxa fulinta ee Ariadne Labs ee Boston, MA.
Soo degso PDF daabacan oo qoraalkan ah
Ma waxaad dooneysaa inaad cusbooneysiiso turjumaad? Akhri oo ku tabaruc koodhka isha . Sawir laga soo qaaday opendoodles
Maxaa websaydhkan? Markii hore waxaan doonayay inaan maqaalka asalka ah la wadaago deriskayga Faransiiska. Laakiin anigoo garanaya inayna aqrin Ingiriisiga, iyo inaan rabo inaan ku biiriyo dadaalka isku fogeynta bulshada, waxaan sameeyay websaydhkan.
Boggan internet-ka wuxuu adeegsadaa Google Translate si nuxurka looga helo 109+ luqadood.
Bog la mid ah: https://staythefuckhome.com/ .